Cheap Ewepụghị Die Fatịlaịza Extrusion Granulator Machine Suppliers na Factory | YiZheng
Gịnị bụ Ewepụghị Die Fatịlaịza Extrusion Granulator Machine?
Ewepụghị Die Fatịlaịza Extrusion Granulator Machine Ezubere maka ụdị na usoro dị iche iche. Igwe mpempe akwụkwọ na-adị larịị na-eji mpempe akwụkwọ ntuziaka, nke na-eme ka igwe na-agbagharị onwe ya n'okpuru ọrụ nke ike. A na-amịpụta ntụ ntụ site na oghere nke ebu ebu site na ala, na pellets nke cylindrical na-apụta site na diski ahụ. Ewepụghị Die Fatịlaịza Extrusion Granulator Machine bụ ihe dị mkpa na akụrụngwa fatịlaịza, ọ dabara maka imepụta nnukwu ihe.
Gịnị bụ Ewepụghị Die Fatịlaịza Extrusion Granulator Machine eji?
Ewepụghị Die Fatịlaịza Extrusion Granulator Machine ka a haziri ma jiri ya rụọ ụdị fatịlaịza ụdị dị iche iche. Ma n'ọtụtụ oge, a ga-ahazi ya ma jiri ya rụọ ọrụ na fatịlaịza na ngwongwo na-emepụta fatịlaịza. Anyị bụ ndị ọkachamara na-emepụta fatịlaịza ọkachamara, anyị abụghị naanị na-enye otu igwe fatịlaịza granulator, mana anyị nwekwara ike ịmepụta ahịrị mmepụta fatịlaịza zuru oke maka ndị ahịa dị iche iche. Na fatịlaịza mmepụta akara, ọ bụ na-onwem na fatịlaịza granulator igwe na ewepụghị anwụ granulator igwe na obi ụtọ n'ịkpụzi igwe iji mee ka fatịlaịza granulator n'ime obi ụtọ udi.
N'oge ọrụ ahụ, a na-apịachi ngwongwo ndị ahụ na ala site na igwe na-agba agba, wee kpochapu ya site na mpempe akwụkwọ ahụ, wee banye na polishing nke jikọtara ọnụ abụọ, na-agbagharị n'ime bọl. NaEwepụghị Die Fatịlaịza Extrusion Granulator Machine nwere uru nke nnukwu pellet na-akpụ ọnụego, ọ dịghị ihe na-alọghachi, ike granule dị elu, ịdị n'otu edo, obere mmiri granule na obere oriri ike.
Njirimara nke Flat Die Fatịlaịza Extrusion Granulator Machine
1. A na-ejikarị igwe akụrụngwa a maka nhazi granule nke fatịlaịza na-emepụta ndụ na ụlọ ọrụ nhazi nri.
2. Nsogbu dị iche iche haziri Ewepụghị Die Fatịlaịza Extrusion Granulator Machine nwere ezigbo dị ọcha ma dị ọcha, ekweghị ekwe na-adabaghị adaba, ihu igwe dị ala na-ebili n'oge usoro a, ọ nwere ike idobe nri ndị na-edozi ahụ nke ọma.
3. Otu nsogbu dị iche iche, a na-ekewa granulu na: Φ 2, Φ 2.5, Φ3.5, Φ 4, Φ5, Φ6, Φ7, Φ8, wdg Ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ dịka mkpa ha si dị.
4. Granule mmiri ọdịnaya bụ ala na kwesịrị ekwesị maka nchekwa na njem, ya mere, ọ ka mma ihe onwunwe itinye n'ọrụ ọnụego.
Akụkụ nke Flat Die Fatịlaịza Extrusion Granulator Machine
►Emechara ngwaahịa granule cylindrical.
►Ngwurugwu nwere ike iru 100%, mee ka ọ bụrụ ihe na-adị ọcha
►N'iji ihe eji eme ihe na ihe ndi ozo ma jiri buru ibu karie ike, odighi mkpa itinye ihe nkpuchi mgbe ichikota.
►Na inogide ngwaahịa granule, ọ nwere ike sieve ozugbo mgbe granulation iji belata ike oriri nke ihicha
►Mgbe gbaa ụka organics adịghị mkpa ọkpọọ, mmiri nke akụrụngwa nwere ike ịbụ na 20% -40%.
Ewepụghị Die Fatịlaịza Extrusion Granulator Machine Video Display
Ewepụghị Die Fatịlaịza Extrusion Granulator Machine Model Nhọrọ
Ọnụọgụ ego (%)
Granule okpomọkụ ịrị elu (℃)
Nke gara aga: Typedị Ordị Ọhụrụ Organic & Compound Fatịlaịza Granulator Machine
Osote: Ugboro abụọ ịghasa Extruding Granulator